FS2004 nkpuchi gbara ọchịchịrị wetara Alphajet de la Patrouille de France.
FS2004 nkpuchi gbara ọchịchịrị wetara Alphajet de la Patrouille de France. 2 afọ 1 ọnwa gara aga #1097
FS2004 wetara Alphajet de la Patrouille de France.
M agbakwunye FS9 enyi gị n'elu ma ọ bụ ọrụ nchịkọta ọdụ ojii. M gosiri ya otu esi amalite engines, wdg, ma mgbe ọ na-apụ ya ụgbọelu ya ndị ọzọ anwụ. M wepụrụ ya na folda ụgbọelu, & ha niile na-egosi na-akwado ya na-agba ọsọ engines dị ka ọ chọrọ.
Onye ọ bụla nwere ike ịgwa m otu esi apụ na ọdụ ụgbọ mmiri a dị mma na ike na ya nwere ike ịhapụ ya na folda ahụ n'emeghị ka ụgbọelu ndị ọzọ dị na mberede?
Oge ike page: 0.149 sekọnd